महिनावारी पछाडि सार्न प्रयोग गरिने औषधिका गम्भीर असर | Ratopati
महिनावारी पछाडि सार्न प्रयोग गरिने औषधिका गम्भीर असर
कहिले काँही विशेष कारणबस महिनावारी पछाडि औषधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । औषधिको प्रयोग गरेर विभिन्न कामका लागि महिनावारी सार्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । महिनावारी सार्न प्रयोग गरिने औषधिले स्वास्थ्यमा के कस्ता गम्भीर असर पार्छ त ?
महिनावारी चक्र प्रभावित गर्छ
यदि तपाईंले धेरैपटक महिनावारी सार्नको लागि औषधिको प्रयोग गर्नुभएको छ भने यसलाई समयमै राक्नुपर्छ । यसले महिनावारी चक्र अनियमित गराउँछ भने प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु पैदा गर्छ । त्यस्ता औषधिको सेवनले गर्भधानमा समेत समस्या आउन सक्छ । बाँझोपनको समस्या पनि निम्त्याउँछ ।
रक्तनलीमा रगत जम्ने खतरा
महिनावारी सार्न खाने औषधिले रक्तनलीमा रगत जम्ने खतरा हुनसक्छ । यसरी रक्तनलीमा रगत जमेर मुटु र मस्तिष्कसम्म पुग्ने पनि खतरा पैदा हुनसक्छ ।
धेरै रगत बग्नु
२० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरुमा यो औषधिको सेवनपछि धेरै रगत बग्ने गर्छ । धेरै रगत बग्दा शरीरमा रगतको कमि भई रक्तअल्पताजस्ता रोगहरु लाग्न सक्छ ।
पखाला लाग्ने तथा पेटको दुखाई
औषधिको प्रयोगले पखाला लाग्ने तथा पेटमा दुखाइ हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन योनीमा रक्तश्राव पनि हुनसक्छ ।
के हो पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट (पीपीई) ?
कोरोना संक्रमित ३० प्रतिशतमा कुनै लक्षण नै नदेखिने : संक्रमण फैलाउन यो वर्ग सबैभन्दा बढी घातक
मास्क लगाउने कि नलगाउने ? : यस्तो छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख नाघ्यो, फ्रान्समा एकैदिन १ हजार बढीको मृत्यु
एनआरएन अस्ट्रेलियाद्वारा २०० जना विद्यार्थीलाई एक साताका लागि खानाको व्यवस्था
रासनसहित राज्यमन्त्री मजदुरको डेरामा पुगेपछि....
खाडी मुलुक कोराना अपडेटः युएईमा शनिबार २४१ जनामा संक्रमण पुष्टि, अरु देशको अवस्था के छ ?
दादुरा-रुबेलाबाट चेपाङ गाउँमा २ जनाको मृत्यु, १५० बिरामी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउनमा थप कडाइ